त्रासैत्रास आडेर काठमाडौं यात्रा - मनभरि त्रास : बसमा बास - Sunuwar.org
त्रासैत्रास आडेर काठमाडौं यात्रा – मनभरि त्रास : बसमा बास
विहानै हिड्नेबेला फोन आयो । उठाएँ । मंगलवार हिड्न लागेको ? – उताबाट जानकारी आयो । अँ – उतरा दिएँ । विहानै खाना पाक्यो । दिदी, दाजु र भाउजुले राम्ररी जानु, भीरको बाटो छ – सुझाउनु भो । म लुखुर लुखुर आफ्नो बाटो लागेँ नौ बजेतिर । स्वर विज्ञानमा विश्वास गर्छु । त्यसैले कुनै साइत हेर्ने चलन छैन हिड्दा । त्यसैले नाकका प्वाल छामेर कुन नाकबाट सास चलेको छ याद गरेँ । दाहिने सास चलेको रहेछ तर देब्रे खुट्टा ढोकाबाट अगाडि सारीसकेको रहेछु । त्यस्तैमा बाटो लागेँ ।
उत्तर दिशा भएर घरबाट निस्केको म घर आगाँनबाट दक्षिणतिर लागेँ । मनिषाले काठमाडौंमा सामान लैजान भनेको हुँदा फोन लगाएँ । लागेना । उत्तमलाई फोन लगाएँ । त्यता पनि फोन स्वीच अफ रहेछ । सेल्पु हुँदै क्लुपा, तोषिपा भीर हुँदै गोठ डाँडाबाट चोकति पुल तरेर सेनी उकालो चढ्दै थिएँ । एक्लै उकालै उकालो । भीरको बाटो कटेर जंगलै जंगल । सुनसान, अनकण्टर । सेनी पाउरहाउस हुँदै माथि पुरानो घर कटेर जंगलमा हिड्दै थिएँ । अचानक पछाडि उता माप्रा भीरतिर ट्याक्टरले ढुंगा बोकेर आए जस्तो आवाज आयो । के करायो ? अचम्मले पछाडि फर्केर हेरेँ । अलि घोरिएर हेरेँ । आवाज नजिकीँदै आयो । यस्तो जंगलमा पनि के करायो यसरी भन्ने लाग्यो । त्यो आवाज झन् झन चर्किँदै मतिर आयो । हेर्दा हेर्दै परबाट भुइँ नै थर्काएर मतिर आएको प्रष्ट देखेँ । ल, के पो आयो, यो जंगल वीचमा मन झस्केर त्रसित बने । भूत हो कि न त कुनै अकल्पनीय जनवार के हो के हो अनेक तर्कना मनमा एकैचोटी उम्रिन पाउँदा नपाउँदै म उभिएको भूइँ नै हल्लिन थाल्यो । त्यसपछि मात्र मलाई यो भुइँचालो हो भन्ने याद भयो । रुख सबै हल्लियो । माथिबाट गोली बर्षे जस्तै ढुंगा बर्षिना थाले । त्यतिबेला मलाई कतै भाग्ने आँट आएन । अब ढुंगाले किचेर मर्ने भएँ भन्ने मात्र मनमा उब्ज्यो । म उभिएको ठाउँ सहित पहिरो गयो भन्ने लाग्यो । म ट्वाँ परेर उँभो मात्र हेरिरहेँ । मुखबाट राम राम भन्ने शब्द अप्रत्यासित फुस्के छ । ढुंगा मेरो सिधा आयो भने छलिन्छु भन्ने होस चाहिँ रह्यो । तर यताउता सर्ने आँट आएन । हेर्दाहेर्दै घरै जत्रो ढुंगा मेरो दाहिने बज्रेर उँधो चोकतितिर गयो । विस्तारै भूइँको कम्पन कम भयो । ढुंगा माथिबाट झर्न रोकियो । अनि हस्याङ फस्याङ अगाडि उकालो तर पचेङ दौडिने कोशिस गरेँ । के सक्नु ? स्याँस्याँ र फ्याँ फ्याँ भएँ । आत्तासले मनमा जरोको नसा तीब्ररुपमा फैलियो । ख्लिनु फर्केर आउँछ भन्छन् गाउँमा । अवश्य पनि अर्को झड्काको भुइँचालो जान्छ भन्ने लागीरहेको थियो । बल्ला बल्ला सेनि पुच्छार, बेँबेर जाने दोबाटोको सल्ला डाँडा निस्केँ । अब भने बाँचे जस्तो लाग्यो ।
डाँडामा निस्केर फोन लगाउन थालेँ । कतै फोन लाग्दैन । घरमा दिदीलाई फोन लगाएँ । फोन गयो उठेन । जिएसएम मोबाइलमा टिरिङ फोन आयो । हेरेको गंगाको फोन रहेछ । फोन लगाउँछु लाग्दैन । सबैतिर फोन गरेँ लाग्दैन । बल्ला गंगाको फोन आयो । उठाएँ । कहाँ हुनुहुन्छ ? उताबाट सोधियो । म ठिकै छु, भन्ने जवाफ दिएँ र ढुक्का भएँ । उता घर तिसुप गैराघरबाट पनि फोन आयो दाजुको कहाँ छस् भनेर । मैले सेनि खिजी चण्डेश्वरीमा छु । सन्चै भएको उतरा दिँदै दिदीको फोन उठेन कहाँ हो ? भनेर सोधेँ । दिदी कहाँ गएको केही थाहा भएन । त्यताबाट उता साल्बु रगनी जाउँ त बाटै मुनि सुख्खा पहिरो लगातर गइरहेको थियो । त्यसैले सेनिबाट सिधै उकालो चढेँ । उकालै उकालो । स्याँ स्याँ । सास बढीरहेको थियो । मन एक तमासले डर लागिरहेको थियो । अलिकति माथि उक्लेपछि बरपिपल चौतरा रहेछ । त्यहीँ झोला फ्यात्त फालेर बसेँ र फोन लगाउन फेरि सुरु गरेँ । कतै फोन लागिरहेको थिएन । हुँदा हुँदै फेरि भुइँचालो आयो । वरपिपल नै उँधोमुन्टो भए जस्तो, भुइँ नै पल्टिए जस्तो । भुइँ काँपीरह्यो । सँग सँगै वारिपारि बुङ्ङा धुवाँ फालेर भुइँ बम पड्के जस्तै पड्कीँदै सुख्खा पहिरो जान थाल्यो । वारिपारि घरहरु दुङ दुङ ढले । धुलै धुलो भयो लिखुकोशी पुरै भूभाग । क्षत विक्षत मन । त्रसित वातावरण । सेनिका मानिसहरु घर छाडेर चौरमा जम्मा भएको देखिए अलिकति माथि उक्ले पछि । भुइँ फट्ट फाटेका थिए । जहाँ टेक्यो त्यही पहिरो जाला जस्तो । डाँडामा बस्नै त्रास । आफैं पनि त्रासदी ओडेर हिडीरहेको थेँ । म जानु पर्ने सैपु ढाँडे भए पनि कसरी बाटो काट्ने ? मनमा डर लागीरहेको थियो । त्यसैले सिधै सेनी माथि देउरालीतिर उक्लिएँ ।
सेनीमै केहीवेर बसेर उकालै उकालो उक्लिएपछि कच्ची रोड भेटेँ । र, साथ साथै तर्सिएँ । भर्खरै खनेको रोडको भीत्ताबाट ढुंगा झरिरहेकै थ्यो । भीर छ होस गरेर जानु होला है, सेनीकै एक जना भाई सुझाए अनुसार त्यो भीरको सडक खण्ड दौडेर नाघेँ एक्लै । पुलै डाँडा निस्कनु अगाडि सुख्खा पहिरो माथि डोजर बिसाएर बसेको थियो । पहिरोबाट आएको धुलोले पुरै गाउँ धुलम्मे पारेको हुँदा मैले पनि केही धुलो नचाहँदा नचाहँदै खानु प¥यो । पुलै पुग्दा गाउँका सबै मानिसहरु जम्मा भएर बसेका रहेछन् । यस्तो भुइँचालो आउँदा पनि कहाँ हिडेको होला ? डर लागेन कि क्या हो मानिसहरु सोद्धै थे । एक क्षण चिनजान गरियो । सोसुप गोङ्रोच भिनाजुसँग भेट भो । एक जना बहिनीले पानी बाँढीरहेकी रहिछिन् । मलाई पनि दिइन् । स्वट्ट स्वाट्ट दुई मग पानी पिएँ । त्यसपछि साल्बु पुग्दा पुरै घर भत्केको रहेछ कमलकृष्ण, बालकृष्ण सुनुवारको । बालकृष्ण सुनुवार मलाई क ख रा सिकाउने गुरु पनि हुनुहुन्छ । उहाँले ढाँडे जाँदा छोटो बाटो पहिरो जानसक्ने भीर भएको हुँदा गाउँ नै गाउँ चप्लेटीबाट जान अह्राउनु भो । ठूला र अग्रजले भनेको कुरा काट्न सकिना । सबै मानिस सडकमा निस्केर बसेका थिए । म सडकै सडक रगनी गैरागाउँतिर लागेँ । बाटोमा बेदबहादुर महतरा भेट भो । उहाँहरुको टिम ओखलढुंगामा पहिलो पटक विजुली उत्पादन भएको पावर हाउसमा बिजुली भूकम्पले काटिएकोले बनाउन हिड्नु भएको रहेछ । त्यसपछि रगनीको पुराना शिक्षक गंगाबहादुर सुनुवारसँग भेट भो । उहाँले पनि यसपाली के भएको हो ? भन्दै बाटैमा ल बसौं भनेर समात्नु भयो । उहाँहरुसँग पनि विदावारी हुँदै अगाडि बढेँ । उता पर वेदबहादुर असई पनि सडकमै जम्मा भएर बस्नु भएको रहेछ । रगनी गैर गाउँको जोर धारा धमिलोभएकोथियो । म सडकै सडक हिडेँ । धुलै धुलो । गाउँको सबै ठाउँमा पानीको मूल फूटीरहेको थियो । म जिली निस्के । पुरै पहाड फुटेको थियो । कतै छाप्रोमा जम्मा भएर खसी काटेर खाई रहेको थिए । मेरो खुट्टा दुखी रहेको थियो । घाम माथि माथि पुगेको थियो पूर्वी पहाड रगनी र पोकलीको । म लिम्ती झर्दै थिएँ । भिरमा डर बोकेर । तलबाट पोकलीको पुच्छार लिखु तीर हुँदै सुमोहरु तीनवटा पोकलीतिर हुइँकिए । म लिम्तीमा झरेर लखातरन्न विसाएँ । र डराउँदै । पुन लिखु ४ को नमूना घर हुँदै सैपुको ढाँडेतिर लागेँ । ढाँडेपुग्दा अनुप र राम सुनुवार राहत पाल थन्काउँदै रहेछन् । अनुपले मेरो साथी भनेर एक जना खैरेलाई चिनायो । चिनजान भयो र मेरो व्यक्तिगत रुपमा संकलन राहत हो दाई रेडियोबाट भन्नु परेउ भनेर अनुपले जानकारी गरायो । रामले गाडी फर्किँदै छ । भेटिन्छ छिटो जानु भनेको हुँदा बाटो लागेँ बसपार्कतिर । गाडि आइपुगेको थियो अरनिकोसुपर एक्सप्रेस । गिद्देहोटल भत्के छ । आजकोभुइँचालाले । मलाई समिरले टिकटको कुरा गरिसकेकोले ढुक्काले त्यहाँ जाँदै थिएँ । तर सबैले टिकट फिर्ता गरेछन् । अन्तमा हामी ५ जना मात्र यात्री भए छौं । खाना खान दिनेकाम हाम्रो । सुत्ने जोहो आफैं गर्नु होला ठूल दाई भनेर साहुले भन्यो । र, खाना खाएर आधा बस स्टप खुला चौरमै खाट निकालेर सुते । म, एक जना डाइभर र खलाँसी त्रास ओडेर बसमा सुत्यौं । मानिसको जीवन यस्तै रहेछ । भइँचालोको त्रास बसको बास । एक किसिमको अविस्मरणीय अनुभव । भोली काठमाडौंपुग्ने धोको बोकेर चुपचाप बसमा बास बसियो । पछि आफ्ना पनि सन्तानले उहिले नब्बेसालको भुइँचालोका बारेमा मैले अग्रजलाई सोधे जस्तै मलाई पनि कुनै दिन सोधिने छ यही कथा सबैलाई सुनाउनेछ, मनमनमा गुन्दै।
क्रमश : ====
« त्रासैत्रास आडेर काठमाडौं यात्रा : भुइँचालोको राहत वितरण तथा वर्गीकरणको मुचुल्का उठानदेखि शाँदार पिदार ग्योर निर्माण समितिका कोषाध्यक्षको गद्दारीसम्म हर्ेदा देख्दै पनि चुपचाप मुकादर्शक
हार्दिक अनुरोध !!! »
Download Koinch Font 0
Download Koinch Font Mukdum 0
Download Koinch Font Mukdum Final 0
कोरोना भाइरस ला दोदे व्लोँइःचा?
अंकमा शक्ति हुन्छ, सचेत हाैं ।
Archives Select Month June 2022 May 2022 April 2022 March 2022 February 2022 January 2022 November 2021 October 2021 September 2021 August 2021 July 2021 June 2021 May 2021 April 2021 March 2021 February 2021 January 2021 December 2020 November 2020 October 2020 July 2020 June 2020 May 2020 August 2019 July 2019 May 2019 July 2018 June 2018 December 2017 July 2017 June 2017 May 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 March 2010 February 2010 December 2009 November 2009 October 2009 June 2009 April 2009
अतीत मुखीया अमरदिप क्युँइतिचा आस्था लस्पाली इन्द्रसेन काेइँचबु काःतिच केदार सङ्केत कोइँचबु क्युइँतबु खडोस सुनुवार चन्द्र प्रकाश चिमरु चेरेहामसो टेकबहादुर सुनुवार (जोन) डा.लाल–श्याँकारेलु थरि कायाबा देव कुमार सुनुवार नरेश सुनुवार नाईलू क्याबचा निराकार नीर कुमार प्रकाश सुनुवार प्रेम सुनुवार भगत सुनुवार भानु सुनुवार भावना परिष्कृत मन प्रसाद मौसम सुनुवार रणवीर सुनुवार राजु सुनुवार शोभा सुनुवार समीर मुखिया साङखु सिर्जना (ङावाच) सुनुवार होम सुनुवार
© 2022: Sunuwar.org | Sunuwar.org